दुखि हुदै लोक गायक प्रकाश सपूतले लेखे शुभेच्छुकहरुलाइ यस्तो खुलापत्र – ThikThak News
पछिल्लो समय चर्चामा रहेका गायक प्रकाश सपुतले चित्त दुखाउदै फेसबुक मार्फत खुलापत्र लेखेका छन्। आलोचना गर्नेहरु कथित सुभेच्छुकहरुका लागि उनले खुलापत्र लेखेर आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। गायक प्रकाश सपुत ‘बोलमाया’ गीतबाट चर्चामा आएका थिए। छोटो समयमा नै लोक गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउदै दर्शक माझ पुग्न सफल बनेका प्रकाश सपुत यस पटक बिबादमा तानिएका हुन्। भर्खर मात्र उनको नया गित ‘लुरुरु हुरुरु’ रिलिज भए लगतै बिबादित बनेको हो । ‘सालको पातको टपरी हुने’ र अर्को गित’ पिडालु’ संग यस्को लय मिल्दो जुल्दो भए पछी उनि तनाबमा छन् ।
भर्खर केहि समय अघि मात्र दोहोरि ब्याटल समेत रिलिज गरेका प्रकाश सपुतको कामलाई प्रसंसा गर्ने हरु छन् तर आफ्नै शुभेच्छुकबाटै आलोचित बन्निरहदा गायक ले चित्त दुखाएको उनले लेखेको खुलापत्रले आभास दिलाउछ। आफुले स्वीकार गर्दा पनि आलोचना हुनु आफ्नो सिर्जनालाई नभई आफूलाई कमजोर देखेर हेपेको अर्थ उनले निकालेका छन्। कमज़ोरी स्विकार्दा पनि अलिकति सहानुभूति नराखेर लगातार व्यङ्ग्य र अपशब्दहरु आईरहनुलाइ सिर्जनालाई होईन आफुलाई कमज़ोर देखेर गरिएको भन्ने महसुस गरेको उनले लेखेका छन्। असल शुभेच्छुकले गाली त गर्छन तर नियत ख़राब हुनेहरुले बदनाम गरिदिन्छन भन्दै पत्रमा गायकले गाली गरेको हो कि बदनामी भनेर प्रश्न सोचेका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेको खुला पत्र यस्तो छ :
आदरणिय शुभेच्छुक ज्यु,
मैले आफ्नो कमज़ोरी स्विकार्दा पनि अलिकति सहानुभूति नराखेर लगातार व्यङ्ग्य र अपशब्द हरु आईरहनु मेरो सिर्जनालाई होईन मलाई कमज़ोर देखेर हो भन्ने महशुस गरिराछु । हुनपनि उमेरले काँचों छु जति जनाले तुच्छ आलोचना गर्नु भएको छ उहाहरु उमेर र अनुभव ले म भन्दा जेठो हुनुहुन्छ, म मुला फुच्चे लाई गन्ने कुरै भएन । संस्थागत हिसाबले म कुनै सम्मानित ओहोदा र पहुँचमा छैन, को डराउने मसंग ? स्वभावले भाबुक र अन्तरमुखी छु लड्न जादैन । रुदा उहाहरुलाई रमाईलो लाग्ने नै भयो । यस अघिका प्रहारमा मेरो बोल्दिने र बचाउ गर्दिने कोहि छैनन भन्ने कुराको भेउ पाएकाहरुको यसपाली कन्फिडेन्स लेभल दोब्बर भयो । घास खाने देखि गु खाने सम्मको शब्द प्रयोग गर्न प्रेरित हुनुभयो उहाहरु । आज दिनभरि मैले एकदमै डिस्ट्रब महशुस भयो । अब गर्न सक्दिन भनेर हात उठाएको बेला हिम्मत गरेर “चरर बरर धरर “ गित गरेको थिए जसको प्रतिक्रियाले नया उत्साह प्रदान गरेको थियो । ओई गाँठें केहि गर्छु कि भनेर आफैले आफैलाई टिकाए ।
त्यसपछिका सिर्जना मा आफुलाई प्रमाणित गरे भन्ने लागेको थियो तर मान्छेले अझै पत्याएका रैनछन नत्र यत्ति एउटा संयोगमा मलाई यति धेरै आलोचना आउने थिएन । मेरो लामो सांगितिक ईतिहास छैन भर्खर शुरुवात भएको छ । मैल केहि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बल्ल बल्ल जुटाएको छु । मेरो कठोर संघर्षको मुख्य उपलब्धि नै यहि हो – ‘ आत्मविश्वास ‘ । विशुद्ध दर्शकको प्रतिक्रिया ले उर्जा थप्छ । उहाहरुको आफु प्रति चासो र शुभेच्छा छ है भन्ने लाग्छ । तर मलाई प्राप्त भएका केहि स्क्रिन शटहरु छन जसले स्टाटस र कमेन्ट लेख्नु भएको छ, केहिले मुखामुख होमा हो मिलाउनु भएको छ ! उहाहरु कहि न कहि निर संगित भावना संग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ । कोहि अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, कोहि केहि समय कलाकारिता गरेर छोडेको हुनुहुन्छ, कोहि सक्रिय हुनुहुन्छ । नभय पनि केहि सांगितिक संस्था संग कुनै न कुनै रुपमा अट्याच हुनुहुदो रहेछ । घर भित्रैको यस्तो प्रहार र व्यवहारले आत्मविश्वास डगमगाउछ । तर जस्तै परिस्थितिमा पनि काम गर्न नछोड्नु मेरो स्वभाव हो । दुख्ने रुने तर गति कम गर्दिन ।
सके उड़ने नसके दौड़ने, नसके हिड्ने त्यो पनि नसके घ्रिसिने तर सपना गन्तव्य र उद्देश्य नछोडने । पोहोर सम्म जुन निरासा थियो त्यो यसपाली छैन । घमण्ड नै गर्ने हो भने व्याटल र बोल माया दुई फरक धारका गितले म नेपाली सबै किसिमका दर्शक स्रोता सम्म पुगिसकेको छु । म जिवनमा जे बन्न चाहन्थे त्यो बनि सके । अब बाकि केहि काम गरेको देखाउनुपर्ने मात्रै छ जसका लागि टिक्नु पर्छ । टिक्नका लागि धेरै काम गर्नु पर्छ । धेरै काम गर्दा कहि न कहि गल्ति हुन जान्छ । तर यतिका वर्ष दुख गरेर देशमै केहि गर्ने आत्मविश्वास जुटाएको एउटा उत्साह जोश र केहि नया गर्न प्रयास गर्ने कलिलो केटोलाई यसरि दुरुत्साहित गर्नु भयो भने समयले कहि न कहि गएर तपाईहरुलाई नमजा फिल अवश्य गराउने छ । नभए पनि पृथ्वी गोलों छ भन्छन कहि कतै भेट हुदा – मेरा दुई हात जोडिएर तपाईलाई नमस्कार गर्न मानेन भने..? सबैलाई मुस्कान बाड्दै गरेका मेरा ओठहरु तपाई निर आएर बन्द भए भने.. ? पाँच हज़ार अटाउने फ्रेन्ड लिस्टमा मेरो फ़ेसबुक अकाउण्ट ले तपाईलाई मात्रै बढि देख्यो भने..?
तपाईको पनि त आत्मसम्मान मा ठुलो चोट पुग्नेछ ।अक्सर रियाक्ट गर्दिन तर सबैको तस्वीर र नाम मनमा बसिरहेको छ । सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ यसरी लखेट्न तिरै नलाग्नुस । असल शुभेच्छुकले गाली त गर्छन तर नियत ख़राब हुनेहरुले बदनाम गरिदिन्छन । तपाईले गरेको गाली कि बदनामी ??? प्रोत्साहन होकि बर्बादी ? यदि बर्बादिमा रमाउदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भर्खरै प्रद़शित हिन्दी चलचित्र कंलकको यो डाईलग काम लाग्न सक्छ- “ जब किसी और कि बर्बादी अपनी जित जैसि लगे, तो हम से ज़्यादा वर्वाद और कोहि नहि ईस दुनियामे “
आइपिएल खेलेर क्रीकेटर सन्दीप आज स्वदेश फिर्ता
तेरिया मगरले गरिन यस्तो खुलासा । लेखिन बजारमा आएको खबर झुट
Previous Article गरिबीका कारण भोक सहन नसकि माटो खादा २ जनाको मृत्यु
Next Article छोराको दुवै मृगौला फेल भएपछी जीवन बचाइदिन एक आमाको अपिल